ministry of finance(ministry of finance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा हुन मुस्किल, अब दैनिक ४.३३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएका चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनामात्र बाँकी रहेकोले लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३१.२८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १८ अर्ब २६...
अर्थलाई बजेटमा सुझाव: बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, टिकटक बन्द गर्नुपर्ने
काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको टोल फ्री नम्बर ११३८ बाट उत्साहजनक ढंगले सुझावहरु संकलन भएका छन्। देशभरका अधिकांश जिल्लाबाट सुझाव आएका छन्। अर्थ मन्त्रालय अहिले यी सुझावको अध्ययन गरेर आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्न खोजिरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन...
टोल फ्री नम्बरबाट बजेटमा उत्साहजनक ढंगले सुझाव पेस, कहाँबाट कस्ता सुझाव ? (दस्तावेजसहित)
काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको टोल फ्री नम्बर ११३८ बाट उत्साहजनक ढंगले सुझावहरु संकलन भएका छन्। देशभरका अधिकांश जिल्लाबाट सुझाव आएका छन्। अर्थ मन्त्रालय अहिले यी सुझावको अध्ययन गरेर आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्न खोजिरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन...
सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा पनि बढ्दै
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बढ्ने भएको छ। बढेको तलब निजामतीका साथै प्रहरी, सेना, शिक्षक र प्राध्यापकहरुका लागि पनि लागू हुनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट कर्मचारीहरुको तलब २ हजार रुपैयाँले बढाउने तयारी गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरुको तलब बढाइएको छैन। कर्मचारीको सेवासुविधा...
आगामी बजेटमा के चाहन्छन् आमनागरिक ? यस्ता छन् ‘११३८’मार्फत सरकारलाई प्राप्त सुझाव
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। बजेट निर्माणको तयारीको इतिहासमै पहिलो पटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो। हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि सरकारी तजबिजमा मात्रै निर्माण...
‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको १५ करोड डलर ऋण सहयोग
काठमाण्डौ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका...
बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिँदै अर्थ, आजबाट १५ मन्त्रालयसँग लगातार छलफल
काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। आउँदो जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। वैशाख १३ सम्मका लागि बनाइएको...
सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा २०% कटौती गर्ने निर्णय
काठमाण्डौ । सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएकोले ३० चैत गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने...
आगामी बजेटका लागि तपाइँका कस्ता छन् सुझाव? ‘११३८’ मा फोन गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न टोल फ्री नम्बर ११३८ सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले विषयगत छलफलमा बोलाइने विज्ञ र सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिबाहेक दूरदराजका सर्वसाधारणको सुझावसमेत संकलन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयासका लागि...
अर्थले माग्यो आगामी बजेटका लागि सरोकारवालासँग सुझाव
काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयहरुका सम्बन्ध सुझावहरु पेस गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आगामी बजेटका लागि सुझावहरु पेस गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको हो। आगामी बजेटका लागि विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ,...
काठमाण्डौ । सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्यांक हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखिएको छ। सोही अवधिको समग्र खर्चमा भने उतारचढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजश्व संकलन कुल लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.७३ प्रतिशत रहेको थियो। यस्तै चालु...
धिबो अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि तयार, यस्ता छन् मूल्यांकनको अंकभार (कार्यविधिसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि तयार गरिएको छ। अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नयाँ कार्यविधि तयार पारेको हो। नयाँ कार्यविधिमा अध्यक्ष उम्मेदवारको मूल्यांकनसम्बन्धी अंकभार तय गरिएको छ। उम्मेदवारको मूल्यांकनसम्बन्धी समग्र...
बैंकहरुले स्थानीय तहको ८०% रकम निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने, तरलता सहज होला ?
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने भएका छन्। गत साता मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बैंकहरुले तत्कालै स्थानीय...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । अहिले सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। धेरै विश्लेषकहरुले बजार घट्नुमा विभिन्न कारण बताइरहेका छन्। सेयर बजार सधैँ मनोविज्ञानले चल्छ। त्यसैले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले सेयर बजार तलमाथि हुने हो। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव एउटा कारण भए पनि अन्य कारणले पनि बजार घट्नुमा भूमिका खेलेका...
रु. १० हजार राहात रकम लिनका लागि निवेदन पेस गर्न सरकारको आह्वान
काठमाण्डौ । सरकारले कोभिड महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एकपटकका लागि १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उक्त राहत प्राप्त गर्न १५ दिनभित्र आफू स्थायी वा अस्थायी रुपमा बस्दै आएको स्थानीयको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरी आग्रह गरेको...